GREATPOOL dia manolotra serivisy consulting isan-karazany miaraka amin'ny fanampiana feno amin'ny famolavolana, famatsiana fitaovana dobo ary fanampiana ara-teknika amin'ny fanorenana. Ny ekipanay efa za-draharaha dia mamela anay hanolotra tolotra vahaolana iray manontolo momba ny famolavolana dobo, ny fanorenana, ny fanamboarana, ny fametrahana fitaovana sy ny fanamafisam-peo, ny tolotra tetikasa ary ny serivisy mialoha ny famolavolana.
Miresaha amin'ny GREATPOOL momba ny zavatra ilainao
Famolavolana dobo filomanosana
Manolotra fanampiana amin'ny fisafidianana fitaovana sy rafitra izay mifameno amin'ny tetikasa dobonao
Fanohanana ara-teknika amin'ny fanamboarana dobo filomanosana
Ny fifantenana ny endrika, ny rafitra ary ny fomba fanorenana tsara no azonay atao ho anao tetikasa dobo!
Vahaolana feno dobo natao ho anao
Raha misafidy GREATPOOL ianao, ny hevitrao sy ny tanjonao no toerana iasan'ny ekipanay.
Nandritra ny 25 taona lasa, dia nanangona traikefa manan-karena amin'ny famokarana fitaovana dobo filomanosana sy ny traikefa ara-teknika amin'ny tetikasa dobo filomanosana. Araka ny sarin'ny famolavolana maritrano alefanao, dia manome vahaolana tokana izahay ho an'ny famolavolana lalina ny dobo filomanosana, fitaovana fanohanana ary fametrahana ara-teknika. Avelao ianao hanamboatra dobo filomanosana mora sy mahomby miaraka amin'ny mason, plumbers, sns., ary mampihena ny vidin'ny fanamboarana dobo filomanosana.
Dingana amin'ny fampiharana ny serivisy dobo
DINGANA 1: Alefaso any aminay ny sarin'ny famolavolana maritranonao
Ilaina ny fifanakalozana hevitra. Ny valinteninao dia ahafahantsika mamantatra ny zavatra takinao sy ny fanirianao amin'ny tetikasa dobo.
Mangataka anao izahay mba handefa anay ny drafitra momba ny tranokala, ary koa ny sarin'ny tranokala sy ny fomba fijery ny tany sy ny trano. Aorian'izany dia handefa tolo-kevitra amin'ny antsipiriany momba ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny quote sarany izahay.
DINGANA 2: Hanao dobo filomanosana mifandraika aminao izahay
Sarin'ny fametahana fantsona
Eo amin'ny drafitry ny gorodona amin'ny dobo filomanosana, dia hanamarika amin'ny an-tsipiriany ny fitaovana isan-karazany amin'ny dobo filomanosana sy ny fandrafetana fantsona samihafa amin'ny efitranon'ny milina.
Fametrahana efitrano fitaovana
Ity no fototry ny fametrahanao. Ny sary fametrahana namboarina araka ny haben'ny efitranon'ny milina dia mampiseho ny fantsona rehetra, ny valves ilaina ary ny fitaovana ao amin'ny efitranon'ny milina. Ny valva ilaina dia omena ary voamarika mazava ny toerana misy azy. Ny Plumbers ihany no mila manao fanorenana sy fametrahana mifanaraka amin'ny sarin'ny famolavolana.
Na manome ny endrika voalohany na miasa miaraka amin'ny hevitra efa misy izahay, GREATPOOL dia manome fitohizan'ny serivisy tsy mbola nisy toy izany, izay hamonjy ny fotoananao sy ny volanao.
DINGANA 3: Afaka manolotra fitaovana fitaovana lisitra sy ny teny nindramina
Fanamboarana fitaovana dobo
Ho an'ny fepetra manokana amin'ny faritra tsirairay, dia hanome lisitr'ireo fitaovana mety indrindra amin'ny faritra eo an-toerana izahay ary mifototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fitsitsiana angovo ary ny fandaniam-bola.
Rafitra fitaovan'ny dobo
Mpanamboatra fitaovana izahay ary manana tombony amin'ny vidiny amin'ny vokatra avo lenta izay tsy ananan'ny mpandraharaha eo an-toerana.
STEP4: Afaka manome anao ny fanorenana sy ny fametrahana tari-dalana ara-teknika
Ny ekipanay dia manana mpitantana tetikasa manana traikefa amin'ny fanorenana mihoatra ny 18 taona mba hanarahana ny tetikasa sy hanome tari-dalana ara-teknika
FAQ momba ny serivisy dobo filomanosana
Inona no ilainao hanombanana ny sarany?
Aorian'ny fifandraisana voalohany dia mangataka aminao izahay mba handefa sarintany topografika momba ny tany ary, raha azo atao, ny sarin'ny toerana misy ny tranonao, ny faritra ary ny dobo. Ilainao koa ny manamarina ny haben'ny dobo ilaina sy ny halaliny ary ny safidy tianao. Ao anatin'ny 72 ora dia handefa mailaka aminao izahay milaza ny andraikitry ny tsirairay sy ny sarany.
Inona no tolotra azontsika omena?
Afaka manome sary famolavolana dobo, famatsiana fitaovana dobo, fitarihana teknika fametrahana.
Tsy maintsy manaiky ny tolotray rehetra ve ianao?
Tsia mihitsy. Serivisy anay: sary famolavolana. Lisitry ny fitaovana. Torolàlana ara-teknika fametrahana. Araka ny filanao, dia azonao atao ny misafidy iray ho an'ny tenanao manokana.
Maharitra hafiriana vao vita ny famolavolana?
Mazava ho azy fa miankina amin'ny enta-mavesatry ny asantsika izany, fa ny fe-potoana antonony dia 10 ka hatramin'ny 20 andro aorian'ny nahazoanay ny fanekenao amin'ny drafitra foto-kevitra.
Raha afa-po ny famolavolana fandaharana, inona no tokony hataoko manaraka?
Ny sarin'ny famolavolanay dia ahafahanao manamboatra dobo filomanosana irery na miaraka amin'ny mpanao asa tanana. Saingy raha ilainao, ny ekipa teknikan'ny orinasanay dia afaka mandeha any amin'ny tranokala ihany koa hitarika ny fametrahana fitaovana.
aiza no hividianako fitaovana sy fitaovana?
Araka ny sary nataonay dia hanome anao lisitry ny fitaovana sy fitaovana sivana izahay. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia homenay anao ny fitaovan'ny fitaovanay. Azonao atao ihany koa ny mividy izany eo an-toerana. Anao ny safidy
ahoana no hahitana mpiasa?
Afaka manampy amin'ny fifandraisana amin'ny mpiasa ao amin'ny faritra misy anao izahay, mangataka azy ireo amin'ny teny nalaina araka ny drafitra famolavolana, ary mandefa ny soso-kevitr'izy ireo aminao rehefa avy nanamarina ny teny nindramina. Fa anao ny safidy farany.
Dobo filomanosana Infinity Edge, Vahaolana amin'ny dobo filomanosana ivelany, Serivisy dobo filomanosana, Vahaolana amin'ny dobo filomanosana ho an'ny daholobe, Company Pool, Tetikasa dobo filomanosana,